बाह्रैमास अनिकाल, जीवनभर दुःख |
बाह्रैमास अनिकाल, जीवनभर दुःख
प्रकाशित मिति :2017-04-10 11:02:34
गोरखाः कहिल्यै काइँयो नदेखेको बेस्याहार सेतो कपाल, सानो गाँठीको ख्याउटे शरीर, कर्कटपाताजस्तै चाउरी चेहरा, एकसरो गुन्यु र पुरुषले लगाउने लुगाले ढाकेको महिला आङ । यो काय विगत आठ दशकदेखि घ्याल्चोक, छतिनगैराको पखेरा खनीखोस्री गरिरहेको देखिन्छ, दिनहुँ । गाउँले उहाँलाई जुनकिरीको नामले बोलाउँछन् ।
यो थलोमा चेपाङ समुदायको मात्र बस्ती छ । साँझ बिहान खोलेसिस्नु, गिट्ठा, तरुल पकाएर खान र रातको पहर कटाउन एउटा घरको पूर्वी गारो बाँसको कप्टेराले बारेर खोपी बनाउनुभएको छ जुनकिरी चेपाङले । आफ्नो उमेर उहाँलाई थाहा छैन, कति वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेको भन्ने पनि हेक्का छैन । शरीरले चार बीस काटिसकेको देखाउँछ तर छरितो जोश, बोलीको दम र मुहारको तेजले दुई बीस नपुगेको भान पार्छ ।
केही दिनअघि उहाँलाई भेट्दा खोरियामा कोदालो मच्चाउँदै हुनुहुन्थ्यो मकै रोप्न । जुनकिरीको खोपीमा उहाँर १० वर्षको नाति प्रेमको बास छ । पतिले संसार छोडेको पाँच वर्ष नाघेको चाहिँ उहाँलाई मेसो छ । एउटा छोरो थियो सन्ते, आत्माहत्या गरेको १० वर्षजति भयो । छोरो एक वर्षको भएपछि आमा बेलीमायाले पनि प्रेमको माया मार्नुभएको थियो । प्रेम यसरी जुनकिरीको पोल्टामा पुग्नुभयो ।
सबैले छोडेपछि काखको नाति लिएर जुनकिरी विवाहिता छोरीको घरको गारो बारेर बस्न थाल्नुभयो । चैत लागेपछि चेपाङ बस्तीमा अनिकालको राज चल्छ । तर जुनकिरीको खोपीमा बाह्रै महिना अनिकालको बास छ । दुई डोको मकै मात्र उहाँको बारीको कमाइ हो । बाँकी दिन आधापेट खोलेले दुईजना पालिन्छन् ।
खान नपाएपछि प्रेमले पनि स्कुल जान छाड्नुभयो । ‘घरमा खाने दुःखले चार कक्षा पढेर स्कुल जानै छोड्योु सरमलाई हाँसोले छोप्दै जुनकिरी भन्नुहुन्छ, ‘बिहानभरि पानी बोक्छ । थकाइ लाग्छ होला अनि घरबाट भाग्छ । स्कुलै जान मान्दैन, छोड्यो । प्रेम हिजोआज भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन घडेरी खार्न हिँड्नुहुन्छ । ‘कहिले २० रुपैयाँ कमाएर दिन्छ, कहिले ४० रुपैयाँ निस्फिक्री हाँस्दै जुनकिरी भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म मैले पालें, अब दुई तीन वर्षपछि उसले पाल्छ । तीन चार वर्षमा बिहे गरेर नातिनी बुहारी पनि भित्र्याउने आशा हर्षका साथ उहाँ सुनाउनुहन्छ ।
नातिबजैलाई बिहानै मकैको खोले, साँझै मकैको खोलेले पालेको छ । ‘तिउन त छैन । नुनको धुलोसित खोले खाने हो प्रेम भन्नुहुन्छ, ‘कहिले(कहिले पुसैं (फुपाजू) ले ब्वाइलरको मासु ल्यायो भने दिन्छ । अरुबेला फुक्कै भात । चेपाङ बस्तीमा बिहान चिया र दिउँसो खाजा खाने चलन छैन । ८० वर्षसम्म पनि साबिककै दुःख, सबै आफन्तको बिछोड, साँझबिहानको चुलो र नातिको भविष्य सम्झेपछि उहाँको भक्कानो सम्हालिनै सक्दैन र आँखा र ओठबाट भेल बनेर उर्लिन सुरु गर्छ ।
बसिरहेको सानो छाप्रो भुइँचालोले भत्काएपछि मर्मत गरिदिने कोही भएनन् । सरकारी सुबिधा लिएर नयाँ घर बनाउने त आकाशको फल भइहाल्यो । ज्वाइँले छोरीमाथि सौता हालेका छन् । निरुपाय छोरीज्वाइँको शरणमा बस्दा सहनुपरेको व्यवहारलाई उहाँको मनले सम्हाल्न सक्दैन, मुखले थुन्न सक्दैन, आँखाले रोक्न सक्दैन र बोल्दाबोल्दै असारे पाखेभल बारीको कान्ला नाघ्दै हाम्फाले झैं हाम्फाल्छ आँखा र गलाबाट । ‘यता सम्झे पनि चित्त बुझाउने बाटो छैन, उता सम्झे पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैनु, पूर्वजुनीको सरापले यो जीवन पाएको भन्दै उहाँ भक्कानिनुहुन्छ, ‘पापको सजाय कहिले सकिएला र मर्न पाइएला । निद्रा लाग्दैन । मर्न काल आएन । तिमी मर्‍यौ भने म पनि मर्छु भन्छ यो नाति ।
छोरीज्वाइँले गरेको व्यवहार भने उहाँले पूरै खुलाउन चहानुहुन्न । उहाँलाई आफ्नोभन्दा पनि नातिको भोक टार्न नसकेको असजिलो छ । भन्नुहुन्छ, ‘बालबच्चा भोकै छ, खानेकुरा छैन, खप्न सक्दैन अनि घरबाट भाग्छ, गाउँ चाहार्छ । दिउँसो खाजा छैन भन्नु पर्दा उहाँको शिर सरमले झुक्छ । ‘खाजै छैन, के खान्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बारीको नाममा एउटा गरो छ । गोरु पनि छैन, जोत्ने मान्छे पनि छैन ।आफैँले खनेर मकै रोप्छु । दुई डोको मकै आउँछ । त्यसले कति पुग्छ र ? ८० बर्से पाखुरा मच्चाएर गरेको निमेकले दुईजनाको पेट पाल्ने गरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
प्रेमले नपाएको माया
बज्यै हुन् तर डेढ वर्षको उमेरदेखि हुर्काकाले प्रेम बज्यैलाई आमा भनेर बोलाउनुहुन्छ । घडेरी खारेर उहाँले अहिलेसम्म पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुभएको छ । कमाएको जति जम्मै पैसा बज्यैलाई दिएको खबर अरुलाई सुनाउन पाउँदा उहाँको अनुहारमा चमक आउँछ । ‘कसैकसैले चाहिँ बिहान सात बजेदेखि १० बजेसम्म काम लगाउँछन् र भात दिएर पठाउँछन् मुहार तेजिलो पार्दै प्रेम भन्नुहुन्छ, ‘एउटा घडेरी खारेको पाँच सय रुपैयाँ भाुथ्यो, बज्यैलाई दिएँ । पाँच सय रुपैयाँ कमाउन उहाँले धेरै दिन श्रम गर्नुभएको थियो ।
बाबुआमाको बात्सल्य नपाउनुभएका प्रेम बाल्यकालदेखि नै ढुंगामाटोमा लडिबुडी गर्दै हुर्किनुभयो । एउटी हजुरआमा हुन् त्यही पनि उदाएदेखि अस्ताएसम्म पखेरामै हुन्थिन् । भोक, तिर्खा चिन्ने कोही भएन । ‘भोक लाग्छ नि तर के खाने र ? प्रेम भन्नुहुन्छ, ‘बिहानको खोले खाएपछि एक्कैचोटी बेलुका हो । पढ्ने मन भएर पनि छोडेको उहाँले बताउनुभयो । ‘पोहोरसम्म त म पनि गाुथेँ स्कुल, अहिले गइनँ लजाउँदै प्रेम भन्नुहुन्छ, ‘सबै साथी स्कुल जाँदा म पनि जान पाुभे, भन्ने लाग्छ, तर । पढ्ने वातावरण नपाएर प्रेमले पढ्दापढ्दै छाडेको स्थानीय शिक्षक अनुप चेपाङको बुझाइ छ । ‘बाउआमा भए पो पढ् भन्छन्, स्कुल जा भन्छन्, नजिकै घर भएका उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले त घरमा छ कि छैन, कसको घरमा ढुक्न पुगेको छ, कहाँ सुत्छ, दिनभरि कहाँ चहार्छ पत्तो हुँदैन । कसले रेखदेख गर्ने, कसले पढ् भन्ने, कसले स्कुल पठाउने, चेपाङ समुदायमा यस्तो समस्या धेरै रहे पनि प्रेमको समस्या अरूको भन्दा बढी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।